१. कोलेस्ट्रोलको औषधि खानेहरुले जाडो महिनामा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्छन् । किन यसो भनेको होला ? म पनि कोलेस्ट्रोलको औषधि खाने गर्छु ।
– रामराज कार्की, सैंबु ।
रामराजजी, कोलेस्ट्रोलको औषधि खानेहरुले जाडोमा खान नहुने वा खराब गर्ने अनि गर्मीमा राम्रो गर्ने भन्ने कुनै अध्ययनले देखाएको छैन । त्यस्तै यस्तो हुने कुरामा वैज्ञानिक आधार पनि छैन । विधिवत्रुपमा पनि त्यसो भनिने गरेको छैन ।
तपाईंलाई आवश्यक भएर त्यो औषधि दिइएको होला । औषधिको मात्रा अनि तरिका पनि चिकित्सकले विचार गरेरै दिएका होलान् । तसर्थ निश्चिन्त भएर खानुस् । साइड इफेक्ट हरेक कुरामा हुन सक्ने हुनाले जाडो होस् कि गर्मी त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नै पर्छ ।
२. जाडो महिना शुरु भयो कि मलाई दमले अलि बढी नै दुःख दिन्छ । यस्तो समस्याबाट बच्ने कुनै उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ ।
– अशोक भट्टराई, सुनसरी ।
अशोकजी, जाडोमा दमले अलि बढी नै दुःख दिन्छ । जाडोमा चिसोले गर्दा श्वास नली साँघुरिन्छ र छातीको संक्रमण बढेर जान्छ । यो समयमा हावाको प्रदूषण पनि अधिक हुन्छ । साथै ढोका बन्द हुने, चिसो हावाबाट बच्न हिटर प्रयोग गर्नुपर्नेजस्ता कारणले हामीले फेर्ने श्वासमा अक्सिजनको मात्रा पनि अलि कम हुन्छ ।
यसबाट बच्ने उपाय भनेको हिटर भरसक नबाल्ने, कोठामा भेन्टिलेसनको लागि अलि–अलि खुला राख्ने, चिसोबाट बच्न न्यानो लुगा लगाउने गर्नुपर्छ । दमका रोगीले सकेसम्म धूलो उडाउने उनीको लुगा, कार्पेट, धुवाँ, धूलोसँग बच्ने गर्नुपर्छ ।
औषधि सेवन गर्नेहरुले नियमित गर्ने, हिटरको सट्टा हट वाटर ब्यागबाट तातो लिने, बिहान घाम लागेपछि घाममा बस्ने गर्नुपर्छ । सम्भावना र व्यवस्था गर्न सकिने सबै उपाय अपनाएर बच्नुपर्ने हुन्छ ।
३. म तीन वर्षदेखि कतारमा छु । ६ महिनादेखि मलाई निद्रा कम हुने, बिहान उठ्दा निराश मन हुने, काम गर्न मन नलाग्ने समस्या भइरहेछ । यसबाट मुक्त हुने केही उपाय छ कि ?
– सञ्जु मगर, हाल : कतार ।
सञ्जुजी, तपाईंले भनेका लक्षणहरु अनि परिवेश विश्लेषण गर्दा तपाईंलाई घरको सम्झना आएर डिप्रेसनको शुरुवात भएजस्तो लाग्छ । तीन–तीन वर्ष विदेशमा, अर्कै परिवेश, अर्कै संस्कार, अर्कै खाना, आफन्तबाट टाढा, सबैजना आ–आफ्नो स्वार्थमा व्यस्त, मानवीय भावनाको अभाव, एक्लो महसुस आदि कारणले गर्दा मानसिक प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।
कमलो मन हुने, साधारण कुराले पनि छुने अनि भावुक मान्छेलाई यस्ता परिवेशले सजिलै प्रभाव पार्न सक्छ । यसबाट मुक्त हुनको लागि सबभन्दा पहिले मन बलियो बनाउनुप¥यो । आफू कुन उद्देश्यले अनि किन कतार आउनुप-यो र आफ्नो योजना अनि कर्तव्य के हो भन्ने कुरा महसुस गरी अन्तष्करण गर्ने अनि घरमा फोन गरी मनका कुरा बाँड्ने गर्नुस् ।
बिहान–बेलुका १५–२० मिनेट ध्यान अनि केही समय योग गर्ने गर्नुस् । सकारात्मक सोचसहितका पुस्तक वा लेखहरु पढ्ने गर्नुस् । यदि त्यसले पनि नभएमा त्यहीँको स्थानीय मनोचिकित्सक भेटेर परामर्श गर्न पनि सकिन्छ । त्यसले पनि नभए आफ्नो घर फर्कन सधैँ खुला छँदै छ । बिरामी भएर अनि न्यून र नकारात्मक सोच लिएर आफैँ पीडित हुने होइन ।
आफू त परिवार र समाजको लिडर हुने बारेमा सोचेर, सधैँ खुशी–सुखी महसुस गरेर अनि मेहनत गरेर जीवन बिताउनेमा लाग्नुपर्छ । मेरो सल्लाह मनन गर्नुहोला । आशा छ, यहाँले सुधारको महसुस गर्नुहोला ।
४. उच्च रक्तचापको औषधि खाएपछि जीवनभर छोड्न मिल्दैन भन्छन् । मलाई उच्च रक्तचापको औषधि सिफारिस गरिएको छ । मेरो उमेर ३६ वर्ष भयो । सो औषधि खाऊँ कि नखाऊँ भएर दोधारमा छु, उचित सल्लाहको अपेक्षा छ ।
– विशाल कार्की, नुवाकोट ।
विशालजी, औषधि खानु–नखानु, उमेर यति–उति भन्ने भन्दा पनि हाम्रो शरीरको रक्तचाप भनेजति ठिक्क वा नर्मल राख्ने हो र सुरक्षित हुने हो । हामीसँग ७–८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी, १०–१२ वर्षका बच्चा वा ९० वर्षका ज्येष्ठ नागरिक जो–कसैले रक्तचाप बढेर औषधि खाएको पनि रेकर्ड छ ।
अनि विभिन्न अवस्थामा रक्तचाप घटेर औषधि घटाएको, छोडाएको वा रक्तचाप बढेर औषधि बढाएको पनि अनुभव छ । जीवनभर औषधि छोड्न नमिल्ने भन्दा पनि चिकित्सकको सल्लाह र आवश्यकता हेरेर औषधि खान शुरु गर्न, घटाउन अनि छोड्न पनि सकिन्छ । मुख्य कुरा ब्लड प्रेसर ठीक ठाउँमा राख्ने हो ।
धेरैले आजकाल २०–३० वर्षमै उच्च रक्तचापको औषधि शुरु गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण दोधार नहुनुस् । ३६ वर्ष उमेर कम पनि होइन, परिपक्वता आउने वयष्क बेला नै मानिन्छ । चिकित्सकद्वारा सिफारिस गरिएको औषधि निश्चिन्त भएर खानुस् । बरु उच्च रक्तचाप भएकाले गर्नुपर्ने नियमित परीक्षण अनि जीवनशैली सुधारमा निरन्तरता दिनुहोला ।
५. जाडो महिना आयो कि मेरो शरीरको छाला एकदमै खस्रो हुने र फुट्ने गर्छ । यसको समाधान के होला ?
– रमिता केसी, बाग्लुङ ।
रमिताजी, जाडो महिनामा छाला खस्रो हुने, सुख्खा हुने सबैको हुन्छ । त्यही हो कि कसैको कम हुन्छ भने कसैको बढी हुन्छ । त्यसैले छालालाई जाडोमा सकेसम्म स्याहार गर्नुस् । धूलो, हिलो, सिमेन्टजस्ता वस्तुको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने भएमा धुने वा सफा राख्ने गर्नुस् ।
खुट्टामा मोजा लगाउने गर्नुस् । छाला खस्रो भएमा वा फुटेमा मन तातो पानीले धुने, सुख्खा गरी पुछ्ने अनि भ्यासेलिन, क्रिम वा तेल लगाउने गर्नुस् । ओठ फुटेमा नियमित क्रिम लगाउने गर्नुस् । तपाईंको समस्यामा सुधार आउनेछ ।
६. मेरो ९ वर्षको बच्चालाई बरोबर घाँटी दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने हुन्छ । यो एलर्जीले भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यसको उपचार कसरी र कहाँ गर्ने होला ?
– जसुदा थापा, काठमाडौं ।
जसुदाजी, बच्चालाई बारम्बार घाँटी दुख्ने, टन्सिल आउने, ज्वरो आउने भएमा तुरुन्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी देखाउनुपर्छ । यदि ब्याक्टेरियाको संक्रमणजस्तो देखिएमा एन्टिबायोटिक नै लिनुपर्ने पनि हुन्छ ।
किनभने यही साधारण टन्सिलले मुटुको बाथ रोग, मृगौलाको रोग, बाथ रोग, दम रोग आदि विकास गराउन सक्छ । यदि भाइरल भएमा त्यति डर लाग्दो हुँदैन । साधारण एलर्जीले ज्वरो आउने हुँदैन । यहाँ काठमाडौंमै बस्नु भएकाले बच्चालाई कान्ति अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल लैजान सक्नुहुन्छ ।
यदि धेरै पहिलेदेखि बेला–बेलामा यस्तो समस्या दोहोरिरहेको छ र कहिल्यै पनि उपचार गरिएको छैन भने एकपटक मुटुको परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने मुटुको बाथ रोग भएको पनि हुन सक्छ । त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
७. मेरो खुट्टाका नसाहरु ठाउँ–ठाउँमा डल्लो परेका छन् तर दुखाइ छैन । यो कुनै रोग हो कि ? उचित सल्लाह पाऊँ डा. साब ?
– हर्क लामा, धादिङ ।
हर्कजी, खुट्टाका नसाहरुमा ठाउँ–ठाउँमा गाँठा पर्ने, डल्लो देखिने कारण रक्तनलीको समस्या हुन सक्छ । जसले धेरै समय उभिएर काम गर्छन् उनीहरुका खुट्टाका नसाहरु फुल्ने र गुजुल्टिने हुन सक्छ ।
पछी गएर खुट्टा सुन्निने र दुख्नेसमेत हुन सक्छ । अहिले शुरुकै अवस्था हुनाले कस्सिएको मोजा लगाउने र धेरैबेर उभिने नगर्नुस् । साथै नियमित हिँड्ने र खुट्टा चलाइरने गर्नुस् । साथै नियमित चिकित्सकसँगको परामर्शमा रहने सल्लाह दिन चाहन्छु ।
८. गुलिया फलफूलको जुस खाएर सुगर बढ्दैनभन्ने हाम्रो गाउँघरतिर विश्वास गर्छन् तर मलाई त्यसले सुगर बढाएको हो कि जस्तो लाग्छ । यो शंका निवारण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
– शिव चन्द्र, सिन्धुलीमाडी ।
शिवजी, गुलियो धेरै खाने तर त्यसअनुसार पसिना नबगाउनेहरुमा चिनीरोग लाग्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने कुरा निश्चित हो । अहिले समाजमा बढेको चिनीरोगको व्यापकताको कारण पनि त्यही जीवनशैली परिवर्तन नै हो ।
मानिसमा मेहनत गर्ने, हिँडडुल गर्ने, व्यायाम गर्ने भन्ने त दन्त्य कथामा जस्तो भैसक्यो । त्यतिले नपुगेर सधैँ भोज र मासु–रक्सीको सेवन अनि फलफूल, खाने तेल तथा तरकारीमा मिसावट । यी सबैको एकमुष्ट प्रभाव नसर्ने रोगको विकास हुन्छ ।
तसर्थ फलफूलको जुस प्राकृतिकरुपमा आफैँ बनाएर ठिक्क मात्रामा पिउन हुन्छ । त्यसले नै सुगर गरायो भन्ने नहोला तर थपथापको लागि भूमिका भने खेलेको हुन सक्छ । जे भए पनि अब नियमित व्यायाम गर्नुस्, चिकित्सकको सल्लाह लिनुस्, गुलियो कुरा, चामल, चिउरा, आलु, चिनी, मिठाई, मैदाजस्ता कुरा बार्ने गर्नुस् वा कम खानुस् ।
९. पानीको फोर्सले दाँत सफा गराउँदा दाँत राम्रो भएको अनुभव हुन्छ र म बरोबर यसरी डेन्टिसकहाँ गएर दाँत सफा गराउँछु । तर यसो गर्दा दाँत हल्लिने सम्भावना हुन्छ भन्छन् । सही सल्लाहका लागि आग्रह गर्दछु ।
१०. म स्वस्थ नै छु । अहिले ५० वर्ष पुगेँ । साथीहरु केही नभए पनि वर्षको एकपटक होलबडी चेकअप गर्नुपर्छ भन्छन् । यो खर्चिलो पनि रहेछ । के यसरी केही नहुँदा पनि बर्सेनि होलबडी चेकअप गर्न आवश्यक हुन्छ ?
गणेशजी, हरेक व्यक्ति यदि ४० वर्ष नाघेको छ भने नियमितरुपमा, कमसेकम वर्षको एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्तै होलबडी चेक गर्ने भनेको राम्रै हुन्छ तर त्यसमा व्यापार प्रदायक संस्थाभन्दा पनि सेवा प्रदायक संस्थामा गराउनु राम्रो हुन्छ ।
जस्तो कि हाम्रो सरकारी केन्द्रीय प्रयोगशालामा प्याकेजको रुपमा रगत, दिसा, पिसाबको परीक्षण हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ छुटेका भिडियो एक्सरे, ईसीजी, छातीको एक्सरे वीर अस्पताल वा अन्य ठाउँमा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पतालहरुले पनि होलबडी चेक गर्ने स्किम छ । त्यहाँ गराउँदा त्यति महँगो नपर्ला । अब विचार गर्नुस्, ५० वर्ष भैसक्नुभयो, केही नभए पनि गर्नु राम्रो नै हुन्छ । किनभने केही भए शुरुमै देखिन्छ र केही नभए झन् ढुक्क भइन्छ ।
११. मेरो ९ वर्षको छोरालाई स्वाँ–स्वाँ हुने समस्या भएको छ । खेलकुदमा भाग लिन पनि सक्तैन । यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
राजीवजी, यदि बच्चालाई स्वाँ–स्वाँ हुन्छ भने तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाएर परामर्श लिइहाल्नुस्, त्यो मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, दम, बाथरोग, रगतको रोग जे पनि हुन सक्छ ।
एकपटक काठमाडौं आएर कान्ति अस्पतालमा शुरुवाती देखाउनुस् । त्यसपछि विशेषज्ञ सेवा चाहिने भएमा त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ र कहाँ, कसलाई देखाउने भन्ने थाहा भैहाल्छ ।
यदि मुटुको समस्या देखिएमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई गंगालाल अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ । यदि फोक्सोको समस्या भएमा वीर अस्पताल अनि रगतको समस्या भएमा सिभिल अस्पतालमा सम्बन्धित विभागमा देखाउन सकिन्छ । घर बसेर, अनिश्चितता पर्खेर, लामा–झाँक्री गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।
१२. कतिपय प्राकृतिक चिकित्सकहरुले सेतो चिनी सकेसम्म नखानु भन्छन् । के साँच्चै सेतो चिनी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो त ? गुलियो मन पर्नेले के खाँदा ठीक हुन्छ ? सुझाव पाऊँ ।
जन्मेजयजी, तपाईंले भनेजस्तै सेतो चिनी मात्रै होइन, नुन अनि मैदा पनि शरीरका लागि लाभदायी होइनन् । सकेसम्म यिनीहरु कम गर्ने, नखाने वा ४० वर्ष काटेपछि त एकदमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै स्वास्थ्य अवस्था ठीकठाक भएकाले खान नै नहुने भन्नेचाहिँ हुँदैन, अलि–अलि खान हुन्छ नै ।
धेरै खान भएन, त्यही हो । त्यसमाथि चिनीरोग भएको भएमा गुलियो खान मन पर्नेको लागि सुगरफ्री चक्की पाइन्छ । त्यो अलि–अलि लिन सकिन्छ । ख्याल गर्नुपर्ने कुराचाहिँ खानुको साथसाथमा नियमित व्यायाम, योग, ध्यान गर्नुप¥यो, सकारात्मक सोच गर्नुप¥यो अनि सुझबुझ हुनुप-यो ।